आज २०७६ माघ २७ गते सोमबार, कस्तो रहनेछ तपाईको दिन ? के भन्छ तपाईको राशिफल ! – Hamrosandesh.com
आज २०७६ माघ २७ गते सोमबार, कस्तो रहनेछ तपाईको दिन ? के भन्छ तपाईको राशिफल !
वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) ः घरजग्गा तथा सवारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला, समय मध्यम रहेको छ । आमा तथा आफन्तसँग मनमुटाव सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । व्यापारमा लगानी गरिहाल्ने समय नरहेकोला केहि समय पर्खनुनै राम्रो हुनेछ । माया प्रेममा धोका तथा शंका बढ्नेछ । राजनीति तथा समाजसेवीहरुका लागि समय मध्यम रहेको छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) ः आँट, साहस तथा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ भने पुरुषार्थले अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले नतिजा आफैँतिर ल्याउँन सकिनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय फलदायी रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) ः धन भावमा गोचर गर्ने शुभ चन्द्रमाले व्यापार व्यवासय फस्टाएर जाने हुनाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तर्ी हुनेछ । आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैजान सकिने तथा बोलेरै धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बका साथ रमाईलो यात्रा गर्दै मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय फलदायी रहनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) ः भौतिक तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, समय मध्यम रहेको छ । ओभर कन्फिडेन्टले नतिजा शुन्य जस्तै हुनेछ । व्यापारमा नाफा कमाउँन निकै नै समय खर्चनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनग्य समय खर्चिएपनि न्यून सफलता हातलागि हुनेछ । खानपान तथा स्वास्थ्यमा ध्यान नदिए खर्च बढ्ने योग रहेको छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) ः लगानी गर्दा ध्यान दिनुहोला, प्रतिफल पाउँन निकै समय खट्नु पर्नेछ । व्यापारमा लगानी गर्नको लागि केहि समय पर्खनु नै राम्रो रहेको छ भने विदेशी लगानीबाट सञ्चालीत संस्थाबाट भने मनग्य मुनाफा कमाउँन सकिनेछ । विदेश यात्राको गतिलो योग रहेको छ भने विदेशमा बसेर पेशा व्यवसाय गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहनेछ । पढाइ लेखाइमा अलि बढि मेहनतको खाँचो पर्ने देखिन्छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) ः प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । पैत्रिक सम्पत्तिको प्रयोगमार्फत् आम्दानी बढाउँन सकिनेछ । व्यापारमा लगानी गरि मनग्य धन आर्जन गर्न सकिनेछ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । सिमित स्रोत साधनको प्रयोग गरि असिमित आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिनेछ । ईच्छाइएका वस्तु प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) ः तारिफयोग्य काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाईने हुनाले पद प्राप्तीको योग रहेको छ । पैत्रिक स्रोत साधनको प्रयोगमार्फत आम्दानी बढाउँन सकिनेछ भने कृषि पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ । प्रेमील जोडीहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) ः खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा लामो दूरीको यात्रा हुने योग रहेको छ । धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरतिरको यात्रा गरि टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । भाग्यले साथ दिने हुनाले सानो लगानिबाट मनग्य धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा दाजुभाईको सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय फलदायी रहनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) ः खानपान तथा मौषमको ध्यान दिनहोला, समय मध्यम रहेको छ । आफन्त तथा दिदीबहिनीसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । गोप्य फाईल बाहिर आउँने हुनाले ईज्जत प्रतिष्ठा जोगाउँन हम्मे हम्मे पर्नेछ । माया प्रेममा धोका तथा अविश्वास हुनेछ । शिक्षा तथा पढाइ लेखाइमा मन नजाँदा प्रतिस्पर्धीहरुभन्दा पछि परिनेछ । व्यापारमा मन्दि आउँनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) ः भौतिक साधन तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बिचार पुर्याउँनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यहरुको पनि सहयोग तथा समर्थन नहुँदा एक्लोपनको महशुस हुनेछ । एकल तथा साझेदारी व्यवसायमा समय दिन नसक्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) ः न्यायिक निर्णयहरु आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ भने शत्रु परास्त हुनेछन् । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । व्यापारमा लगानी गरि दिगो फाईदा हुने कार्य शुभारम्भ आरम्भ गर्न सकिनेछ । पुराना थाति रहेका कामहरु सम्पादन हुनेछन् ।